रिप्लेस गर्दै टाइगर - बलिउड - साप्ताहिक
रिप्लेस गर्दै टाइगर
अभिनेता टाइगर श्राफ बलिउडका पुराना अभिनेताहरूका लागि चुनौती बन्दै गएका छन् । आकर्षक व्यक्तित्व, अब्बल नृत्य तथा जोडदार एक्सनका कारण टाइगरले कम समयमै आफूलाई दरो अभिनेताका रूपमा स्थापित गरिसकेका छन् । यसबीच उनले ब्याक टु ब्याक दुई जना सुपरस्टारलाई दुई नयाँ चलचित्रबाट रिप्लेस गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
चलचित्र रेम्बोको रिमेकमा पहिले रितिक रोशनले अभिनय गर्ने पक्का थियो, अहिले आएर टाइगरले उनको स्थान लिएका छन् । उक्त चलचित्रका निर्माता–निर्देशकले रितिकको स्थानमा टाइगरलाई लिएको घोषणा नगर्दै एउटा अर्को चलचित्रका लागि टाइगरले सलमान खानलाई समेत रिप्लेस गरिदिएका छन् ।
क्षणम शीर्षकको चलचित्रको रिमेकमा अब सलमानको ठाउँ टाइगरले लिनेछन् ।
विवाह गर्दै प्रियंका
सलमानका टप १०
सलमानका सारथि भाद्र २२, २०७५
३६ वर्षीया महिलाको कुमारित्व लिलाम भाद्र २०, २०७५
इन्दिरा गान्धी बन्दै विद्या वालन भाद्र १९, २०७५
पहिले रिजेक्ट, पछि ओके ! भाद्र १७, २०७५
संकटमा प्रियंका भाद्र ९, २०७५
विवाहले रोक्दैन चलचित्र यात्रा ! भाद्र ८, २०७५